Sharife, Khadija (2010) FIFA’s Gordion Knot. Africa Report : 0-1.
Translation by Faith Ka-Manzi
Ukuqinisa imithetho nguFIFA: Umbiko NgeAfrika
Ngu Khadija Sharife
Yahunyushwa ngu Faith Ka-Manzi
Isiqubulo esihambisana ne Ndebe Yomhlaba yebhola likanobhutshuzwayo ka2010 esithi “Kuzwe sekukhona” sifana nesidakamizwa. Ezikhungweni zamatekisi, lapho kudayiswa khona emigaqweni kanye nezindawo zokudlela, ezindaweni zinke eNingizimu Afrika kugcwele ukusasa – kanye nokuziqhenya. Eminyakeni eyishumi nesithupha edlule, umasikhumbula kahle, abebala eNingizimu Afrika babengenawo amalungelo esintu ngenxa yonya lombuso wobandlululo.
Kusukela ezinkundleni zemidlalo – eqedwe ukulungiswa nokwakhiwa ngenxa yengcindezi ye Fifa ukuthi kungaze kufike izinyanga eziyisithupha ngaphambi kwalemidlalo kungaqediwe ululungiswa kwalezizinkundla, kuya kwizikhumulo zezindiza kanye nezinye izindawo, iNingizimu Afrika ikwazile ukugcina lemigomo.
Abaqguqguzeli baleNdebe baseNingizimu Afrika iLocal Organising Committee (LOC) bakwazile ukuchitha ibhajethi eyavunyelwana neFIFA ka3 bhiliyoni wamarandi futhi bese besebenzise amaphesenti alemali angu32 phakathi kwenyanga kaApril.
Kodwa lokho akusho ukuthi konke kuhamba kahle.
Kusasele amasonto ayisishagalombili ngaphambi kweNdebe Yomhlaba, iNingizimu Afrika yayi namathikithi angu 355 000 wezinkulungwane angakadayiswa. Umsuka wenkinga, ukuthi izakhamuzi zihlupheka kakhulu ukuthi zingathenga amathikithi , lendaba yangenelelwa nguhulumeni ukuthi awaxhase lamathikithi.
Siyazi ukuthi abalandeli bethu bayahlupheka,” kusho isikhulu se LOC uMnumzane uDanny Jordaan. “Ngakho-ke sibone kukuhle ukuhti sibahlangabeze.”
Ngeshwa, ukuxhaswa nguhulumeni esikhwameni sezimali yezwe kuvele kwazwela kakhulu. Amathikithi athengwa ngamaqembu abantu adayiswa ngo20 wamadola kanye nomdlalo wokugcina ngo150 wamadola, kuchazwe njengamathikithi ashibhe kakhulu emlandweni weNdebe Yomhlaba. Amathikithi angu120 000 ayebhekelelwe ukuthi kuphiswane ngawo mahala, ngoba kubhekelelwa labo abahola amadola ngu250 ngenyanga – labo abaqashwe ngokupheleleyo.
Lokhu kuyaphikisana nokuphathwa kwendebe yomhlaba iJalimane ngo2006, lapho umnotho wakhona wakhula ngamaphesenti angu1.
Ikomidi elalihlanganisa iNdebe Yomhlaba laseJalimane lona lalibhajethe amadola angu659 wezigidi. Lelikomidi lenza inzuzo engu237.5 yamadola ngenxa yokuthengwa kakhulu kwamathikithi okwenza ukuhti kube khona inzuzo eyayingalindelwe engu31.1 yezigidi zamadola.,” kuveza uDokotela Udesh Pillay, ongumhleli weDevelopment and Dreams.
Futhi akubhekiwe ukuthi ezokuvakasha, indlela yesibili yokukhulisa umnotho, ecatshangelwa ukuthi ingakhulusa umnotho ngamaphesenti aphakathi kuka0.4 kuya ku0.7, uma kuqhathaniswa ngemali ebiqageliwe ukuthi izokwenziwa.
Ngokusho kukaJordaan, ezokuvakasha ezafaka ingxenye eysigidi ngo2003 ngeCricket World Cup manje seyehliswe ngesibalo esingu350 000 wezinkulungwane, ngenxa yomqashi wamahotela kanye namathikithi kaFIFA, ohlala eSwitzerland wenkampani iMatch AG. Lenkampani isolwa ngokuthi noma ingazange ingenele ukukhethelwa ukwenza lomsebenzi okuveza ukukhohlakalo kwayo, ngokunyusa ukubiza kwezindawo ngamaphesenti angu30. Njengokuvez komunye ophethe izindawo zokuvakasha uchaze ukuthi bekufanele bakhiphe imali engu224 000 wamarandi kuMatch AG, futhi babaniki namaphesenti ayishumi ngethikihti nethikithi ebeselithengile uma ephinda elidayisa
IMatch AG iphethwe inhlangano iByron PLC, eyaziwa njengengesemthethweni ukufunela izivakashi zeNdebe yomhlaba eziNdebeni zomhlaba eziyisithupha esezidlalile ngaphambilini.”
Enye inhlangano enguzakwabo i Match Hospitality, yona ebhekene nokunakekelwa kwezivakashi, ibala umshana kaBlatter , uPhilippe, njengomunye wezikhulu ngenkampani yakhe ebizwa ngokuthiwa iInfront Sports and Media Corporation.
Noma-ke iNdebeYomhlaba yaseNingizimu Afrika ifana mayelana nokuchithwa kwezimali, ezwenilaseJalimani amaphesenti angu60 (okuhlanganisa nezinkundla eziyishumi nambili), konke lokhu kwakukhokhelwe yizinkampani ezizimele, okusho ukuthi kwathulwa umthwalo omkhulu ukuthi kungasetshenziswa kakhulu imali yabatheli bentengo noma izakhamuzi zakhona.
Ake sikubeke kucace, kusho uNobhala Jikelele weFIFA uJerome Valcke.Indebe Yomhlaba eNingizimu Afrika ayinankinga yezimali neFIFA,” ebhekise kwinzunzo esiqinisekisiwe ka$3.3 wamabhiliyoni amadola kwimicimbi eyenzeke ngaphambi kokuba iqale lemidlalo, amalungelo okuthengisa: ezikamabonakude kanye nezokudayisa.
UFiFA usolwa ngokuthi esikhwameni sawo uzogombhela inzuzo engu94 wamaphesenti wonke esephelele. Lokhu kwabiza iJalimane u811 wezigidi zamadola ngeNdebe Yomhlaba yango2006, lapho uFIFA wenza inzuzo khona ka2.19 wamabhiliyona amadola.
Izimali ezingenayo emazweni asuke ephethe iNdebe yomhlaba, wonke asuke elawulwa indlela yokuhweba ngoMthetho ewubekelwe.
Imalini ebize iNingizimu Afrika ngokuba izwe elibhekelele iNdebe Yomhlaba?
Ngokusho kukaPillay, imali ekucatshangelwa ukuthi uchithwe kulungiswa izinkundla zemidlalo futhi kwakhiwa nezintsha ifike ku1,346.9 wamabhiliyoni amadola : eKapa lapho kuhlala khona izibukeli ezingu68 000 wezinkulungwane kuchithwe u366 wezigidi zamadola, eThekwini lapho kuhlala khona izibukeli ezingu70 000 wezinkulungwane kuchithwe u334.2 wezigidi zamadola, eBhombhela, kuchithwe u105 wezigidi zamadola lapho kuhlala khona izibukeli ezingu45 000 wezinkulungwane, ePholokwane, u92 wezigidi zamadola lapho futhi kuhlala khona izibukeli ezingu45 000 kanye naseNelson Mandela Bay lapho kuchithwe khona u154 wezigidi zamadola lapho kuhlala khona izibukeli ezingu48 000 wezinkulungwane. Izinkundla ezilungisiwe ezihlanganisa iMangaung, iJoburg Ellis Park kanye neSoccer City, kuhlanganiswa neRustenburg kanye nePretoria, kuchithwe u294.8 wezigidi zamadola.
Futhi lezizinkundla zidle ngaphezulu kuka105 wezigidi zamadola (R818 million) okwakuqalwe kwavunyelwana ngawo ukuzilungisa kanye nokuzakha ,okusho ukuthi imali esetshenzisiwe ikhule ngamaphesenti angu750.
Inkundla yaseKapa, iAthlone Stadium, okuyiyona nkundla okwakubhekelelwe ukuthi kuzodlalelwa kuyona, ayibange isanakwa uma sekufike omele UFIFA uValke – owathi uFIFA akazange asithande. UGert Bam, ungumqondisi wezemidlalo kanye nokungcebeleka, uchaze ukuthi isinqumo esingaphikiswanga sesifundazwe sokuxhasa ukuthi lemidlalo ibesenkundleni yaseAthlone ngenxa yokuthii ihlala abantu abahlupheka kakhulu “ sasizojika idolobha, futhi sibe nomphumela omuhle emlandweni wezindaba ezimbili zalelidolobha elinezakhamuzi ezicebila kanye nezimpofu…”
Kodwa lokhu akwenzekanga.
Ngokusho kukaFIFA, “Izigidigidi zamabhiliyoni zababukeli ngeke zifune ukubona imijondolo kanye nokuhlupheka okukhulu kangaka.”
U Karen Schoonbee kanye noStefaans Brummer, ababhale incwadi ethi Player and Referee:
Conflicting interests and 2010 Fifa World Cup, (phecelezi “uMdlali noNompempe) ibhekelela ukuthi ongomunye omele iFIFA kwiLOC, yaziba ithuba lokuthuthukisa indawo yabampofu, ukuze kwakhiwe inkundla ka4.5 bhiliyoni wamarandi, ukuze kubukwe imidlalo yesigamu esandulela esokugcina semidlalo yeNdebe Yomhlaba. Ukulungiswa kwenkundla ebivele ikhonadukuze kuqinisekiswe ukuthi lenkundla inezidingo ezibalulekilebekuzobiza inkundla yaseAthlone u1.1 bhiliyoni wamarandi
Lenkundla izoba yisithiyo ngoba abadlali bakanombhoxo nenkundla yaseNewlands ngeke bathuthela kulenkundla entsha futhi ngeshwa imidlalo yebhola ngeke ihehe imidlalo lapho inkundla izogcwala phama,” kusho owayephethe umnyango wezemidlalo nokungcebeleka, uRod Solomons
Kusenjalo iMoses Mabhida yaseThekwini, ebhekelelwe ukuhti kudlalwe kuyona imidlalo eyisikhombisa yeNdebe Yomhlaba, futhi eyakhiwe ngo3.1 bhiliyoni wamarandi, iyona kuphela eAfrika yonke etuswa ngokuba ungqa phambili ngokuba kungadlalwa luuo imidlalo yamaOlympics ngoba inazo zonke izidingo zalomdlalo (Olympics). Lenkundla esekwehlisiwe ukumumatha kwayo abantu kwaba ngu56 000 wezinkulungwane, yakhiwe nje eduzane ncamashi neKings Park Stadium (ABSA Stadium), okuyinkundla yeqembu lombhoxo iSharks, lapho kuhlala khona izibukeli ezingu50 000 wezinkulungwane. Abaphathi baleliqembu lombhoxo bakubeke obala ukuthi abazimisele ukuthuthela eMoses Mabhida okudale ukuthii izikhulu zikaMasipala weTheku kanye neKapa ziphithane amakhanda. Ukuze kube khona inzuzo ezoba, umphathi kaMasipala weTheku, uMike Sutcliffe – Usanda kuvuma ukuthi idolobha lizogqilazeka ukubhekana nemali yokugcina iMoses Mabhida isikhathi eside, uchaze ukuthi, iKings Park izovele idilizwe.
Kodwa umnyombo weFIFA kwakungekhona-nje kuphela ukuba nezinkundla ezisemgangathweni womhlaba, kodwa futhi nemidlalo idlalwe emadolobheni aphambili aseEningizimu Afrika.
UJordaan yena uthi lo5.4 bhiliyon wamadola ezimali zabatheleli bentenga (ekwakhiweni kwezinkundla kanye nokulungiswa kwezinye izindawo) efakwe kulemidlalo yeNdebe Yomhlaba izodala ukuhti kubekhona ukwehla kwenzuzo evela kwabanothile iza kubantu ngokudaleka kwemisebenzi kanye nentuthuko. Kodwa eqinisweni ezinkulungwaneni ezingu2 2 000 zemisebenzi ehambisana neNdebe yomhlaba, izikhundla emisebenzi eziphakathikuka70% kuya ku80% bekungabantu abaqashwe njengotoho, futhi benikwa iholo eliphakathi kuka1kuya ku2 wamadola ngehora, ngesikhathi lapho izinkampani zokwakha zona zibike ukuthi zenze inzuzo esuka ku54 kuya ku145 wamaphesenti ngaphambi kwentela.
Lesisikweletu sidlondlobaliswa ukwehla komnotho okuvelele umhlaba wonke kanye nemibiko emibi ngobugebengu obubhidlangile kulelizwe (okuvezwe ibhukwana lezokudayisa laseNgilandi I’Kevlar Vests’ elibhalelwa izivakashi , phezu kokuba uhulumeni efake izimali ezishisiwe ngamaphoyisa angu41 000 ezinkulungwane kanye nokunyusa izinga lezokuvikela ngesikhathi neNdebe Yomhlaba), ngokusho kwephephabhuku iEconomist ebize iNingizimu Afrika njengezwe “elinobudedengu kakhulu” kwiminotho eyishumi nesikhombisa efufusayo.
INdebe yomhlaba kaFIFA iyawuwisa kunokuwufukula umnotho wezepolitiki waseNingizimu Afrika. Isekela likaMongameli weFIFA, uJack Warner waqamba amanga ngenkathi ethiiFIFA ikhokha intengo kumazwe asuke ebukisa ngemidlalo yendebe yomhlaba. Kunalokho iFIFA izobe ithola zizdingongqamgi zamahala njengezempilo, ukuvikelwa kanye nokuphepha, ezokuthutha, ezokuxhumana, amalungelo ezengqondo nokudayisa, nokulawula ukuhti obani abangadayisa futhi ngaphansi noma ngaphezulu kwamakhilomitha amangakanani, okungaziwa ukuthi kuzobiza malini.
Lokhu kungakhokhi kwabo intela kubalwa izinkundla, zizndawo lapho kungabakhona izinkampani nabangani beFIFA kuphela, izindawo zomphakathi zokubukela ezaziwa ngamaFanparks, izindawo zezitatanyiswa, izindawo zezokuxhumana – ezizofika umhlaba wonke kanye nzindawo zokupaka izimoto zezitatanyiswa.
IFIFA iyenqaba ukunika izintatheli igunya lokubika noma ukuhambela lemidlalo ezibonakala sengathi ukuthi zizobuza ukuthi ubani ozomelana nezindleko zalemidlalo.
UFIFA nguyena ‘umnikazi walemidlalo’, futhi lokho kwenza abe negunya lokusho ukuthi yonke into kumele ihambe kanjani. Lapho kunamatende alomcimbi, konke lokhu okulandelayo kungalethwa noma ngubani owasemazweni angaphandle ukudla, izimbali kanye namatende.Okhulumela iMatch AG uPeter Csanadi usasanda kungena obishini ngokucekela phansi izinkundla zokuzilolonga ngenkathi kwakhiwa amatende enziwe kwelaseJalimane – okubizwe ngokuthi ukuthengwa kwamatende angcono avele eJalimane ngoba awaseNingizimu Afrka awekho eqophelweni eliphezulu.
Indlela abeza ngayo yenza ukuthi kufezeke izidingo zongxiwankulu bomhlaba – ngaphandle kokulawulwa nokubhekwa. Kuphela-nje imali,” kusho uAndrew Jennings, intatheli kanye nomunye wababhali be Player and Referee.
UFIFA usezuze kakhulu ngempela ngaphambi-nje kokuba kuqale imidlalo. Futhi uma izibukeli seziphindele emazweni azo, futhi nenjabulo isiphelile, kuyabonakala ukuthi amazwi akhulunywa nguJordaan okuhti iNingizimu Afrika izobe yingxenye yomphakathi womhlaba awalona iqiniso.
Umbuzo kodwa uthi, ngobani abazuzile ngalomcimbikazi –
INingizimu Afrika noma uFIFA?
Kwakuthiwa ukungenelela kweNingizimu Afrika ukuphatha iNdebe Yomhlaba kuyinhlekisa. “Ngabe iAfrika inazo izidingogqangi zokubhekelela umcimbi omkhulu kangaka?,” kusho Irvin Khoza uSihlalo we 2010 FIFA World Cup Local Organising Committee yaseNingizimu Afrika. Ishumi leminyaka kulungiselelwa lomdlalo kanye nephupho lokuphatha lomdlalo ngo2006 waqala ngo1994: imbewu yatshalwa emiqondweni yeSouth Africa Football Association (SAFA), ngowayenguMongameiI uStix Morewa, ngenkathi ebuya kwi1994 World Cup eyayiphethwe yiMelika, futhi eyalandelwa yincwadi kaMorewa naye efuna iNingizimu Afrika iphathe lomdlalo.
Kodwa ukukhankasa kweminyaka elishumi akubanga namphumela ngenkathi isikhulu seOceania uCharles Dempsey enqaba ukuvotela iNingizimu Afrika. NgokukaKhoza, esebuyela eNingizimu Afrika ekhaya lowasenguMongameli waseNingizimu Afrika uNelson Mandela, babetshelwe ukuthi, “Hambani bafana, nilwe.’ UMandela uyazi ngomzabalazo.
Lohulumeni vele wawuxhaswe ngamabhange ezokuhweba asemazweni aphesheya, njengokuchaza kukaNdunankulu uVorster njengokuthi “izitini ezidongweni zokubakhona kwalombuso. “Kodwa iminyaka ejele “ekhulumisana” nezikhulu zobandlululo kwafundisa uMandela ulwimi lokubonisana, okwasetshenziswa ngeNdebe Yomhlaba lobhola lombhoxo, umlando obalulekile eNingizimu Afrika lapho kwakuthiwa asibungaze amaBhokobhoko, futhi sikhombise ukuthakasa noma sasazi ukuthi imali yayingekho.”INdebe Yomhlaba izonhlanganisa abantu.
“Uma ngabe kukhona into ekwazi ukuhlanganisa bantu kulomhlaba ibhola likanobhutshuzwayo,” kusho uMandela, owakhala lapho ezwa ukuthi iNingizimu Afrika iphumelele ukuphatha iNdebe .
Umalndo webhola likanobhutshuzwayo eNingizimu Afrika – kanye nengxenye enkulu yaseAfrika, ingubufakazi obukhombisa ukusabalala kwalomdlalo noma ngabe zikhona noma azikho izidingogqangi ngaphandle kokubhekelela ubuhlanga, ubuzwe, amasiko kanye nokuth abantu bacebile noma bampofu.
Kodwa umdlalo wombhoxo, necricket kanye nokubhukuda kwiyimidlalo edlalwa kakhulukazi ngabamhlophe abacebile, kanye nengcosana yamaNdiya – kodwa ibhola ngoba liyakwazi ukudlalwa noma ngabe ikuphi – kwaba ngumdlalo ovele kubantu abamnyama – futhi kwaba kumdlalo wokuzingcbelekela wabacindezelwe – nguhulumeni wamaBhunu.
Ukwamukelwa kwebhola kufaniswa noduma lwaseNgilandi, “okuyizwe lebhola, elasabalala umhlaba wonke ngenkathi iNgilandi idla ngodli amanye amazwe.
Ngo 1892, Football Association of South Africa (SAFA) okwakungeyabelungu bodwa yalandelwa ngukuqanjwa kwe South African Indian Football ngo1903., iSouth African Bantu Football Association ngo(1933), kanye neSouth African Colored Football Association ngo(1936).
Kusukela ngo 1966 kuyaku 1992, iNingizimu Afrika yayingavunyelwe ukudlala iNindebe Yomhlaba ngenxa yobandlululo. ISouth Africa Soccer Federation (SASF) yabuye yamukelwa kwiFIFA ngenxa yokukhulunyelwa ngowayenguMongameli weFIFA uStanley Rous ngokuqala kwama1960, kodwa imizwa eyayigcwele kwakungukugxeka ukwamukelwa yiFIFA imithetho yobandlululo. Okwenza ukuthi ukhongolose weFIFA uphinde futhi ungayamukeli iSouth African Soccer Federation ngo1966, noma uRous wayesaqhubeka efuna iNingizimu Afrika ibe yingxenye.
Owayephethe iBrazili uJoao Havelange, owagcina futhi esenguMongameli weFIFA ngo1974, waqaphelisisa ukuthi uxwaywa kanjani uRous nGesinqumo sokuxhasa iNingizimu Afrika, futhi waphumelela ngokuma nalesisinqumo.
Ukuphatha kukaHavelange kwadala ukuthi kube khona ukulalelwa kwamazwi ezizwe ezicindezelwe futhi kuphindwe kufakwe amazwe aseAfrika eNdebeni Yomhlaba kusukela ngo1974 kuze kube manje.
Ngaphambi kwalokho iGibhithe kuphela elalidlala.
ENingizimu Afrika yobandlululo, inkampani yotshwala iSouth African Breweries yatshala imali eningi ebholeni kwi National Professional Soccer League (NPSL), yaphumelela kakhulu kubathengi abamnyama, ikakhulukazi emalokishini kanye nakubasebenzi basezimayini.
Ngokuqala kweminyaka yawo1990, lapho uhulumeni wobandlululo wayeseqala ukuxegisa ubandlululo, kwavela izinhlangano ezine zebhola ezazimbandakanyisa neSAFA.
Lokhu kwaqhakambisa ukuxegiswa kobandlululo nokufika kwesikhathi sokuphela kobandlululo eNingizimu Afrika.
Kodwa ngaphandle kokuthandabuza yokuthi lalikhona ikhono emalokishini, uhulumeni waseNingizimu Afrka wahluleka ukubhekana ngokwanele izidingo zezimali, ukwakha izindawo zokuthuthukisa iqembu labadlali beminyaka engaphansi kwamashumi amabili nanye eminyaka, nokuthuthukisa ukuhti isiko lebhola libeseqophelweni eliphezulu ezweni – okuwumdlalo odume kakhulu, ngaphezu kwemidlalo eyayinedumela kakhulu.
Ngo2006, unyaka lapho iNingizimu Afrika eyayifisa ngayo ukuphatha imidlalo yeFIFA, izwe laselifike kunombolo 85 kumazwe adlala lomdlalo, lokhu okwakudukisa uhulumeni ukuthi ufune ukuphatha lomdlalo kunokuthuthukisa ikhono lezwe.
Kungenxa yamaqembu aphesheya emazweni aseNyakatho ikakhulukazi eFrance , lapho abadlali baseAfrika bekwazile ukungena futhi badlale ebholeni elikhokhelayo.
Amazwe ayebuswa amaFrench iwona adlala kakhului emazweni aphesheya. Ngo2006 lamazwe kwakuyiCote d’Ivoire, neTogo,neTunisia, kanye ne Angola neGhana; ngo 1998, iTunisia, iMorocco,
iCameroon, iNigeria ne South Africa; ngo1994, iMorocco, iCameroon kanye neNigeria ne
Nigeria; ngo1990, iCameroon neEgypt; kanti ngo1986, no1982 kanye 1978, kwakukhona neAlgeria neMorocco; neAlgeria kanye neCameroon; kanye neTunisia.
Kodwa ukungabibikho kwezidingogqangi, amazwe aseAfrika ayehluleka – noma ayengazimisele ukuthuthukisa ibhola lasemazweni aseNingizimu neAfrika njengomdlalo okhokhelwayo, kwenza lomdlalo waba ngowezimpofana, umdlalo owawudlalelwa uthando, kusuka phezulukuya phansi.
Ingakho-ke kulokhu iNingizimu Afrika ihlale ibhekwe njengesethenjwa esikhulu emazweni aseNingizimu neAfrika, ngenxa yokubonakala njengesikhondlakhondla samndla kwezombusazwe kanye nezomnotho wongxiwankulu kanye “ngokuduma kakhulu emhlabeni wonke” Noma-ke lelizwe laqopha umlando ngokuphatha izindebe zombhoxo kanye neCricket ngo1995 kanye nango2003, ukufika kweFIFA ngo2010 kubonakale kungenelela ezindaweni zabamnyama kanye neqembu lebhola laseNingizimu Afrika – elaziwa ngeBafana Bafana – noma-ke lingaphumeleli ngaleyondlela uma lidlala, kodwa libe lizithola izindodla zezimali kanye nokuphathwa kahle.
Ukuzigqaja ngobuzwe, futhi kuyobe kuyingqayizivele ezweni kazi laseAfrika, okungukuphumelela okukhulu okunikezwa amandla ebhola ezweni kazi laseAfrika.
Lokhu kuphikisana kakhulu namazwe aseSouth America – elinye izwekazi lapho ibhola lingumdlalo ohamba phambili, eseliphathe iNdebe Yomhlaba izikhathi ezine.
Empeleni, izizwe eziningi ziyaqhudelana ukuba ezikhundleni ezingamashumi amathathu nambili zeNdebe Yomhlaba, amakhulu amabili, kunalawa angamalunga eNhlangano Yezizwe.
Lokhu kubhekiswe kakhulu ekuzigqajeni ngobuzwe okuhlanganiswe nebhola ezingqondweni zabantu baseAfrika.
Ukuzwa ngokucatshangwa ngokuthi ukukhululeka ebholeni ikhona lokhu okwenza lomdlalo ube nenzuzo enkulu;uFIFA uyena othola kakhulu inzuzo – amaphesenti angu94, ngokohwebo, futhi nasezimakethe zaseAfrika, eAsia kanye nasemazweni aseLatin America anezidingogqangi ezinkulu zomnotho.
“Njengoba sihamba ngaphansi kwesisho esithi “izwe elilodwa, umoya owodwa, iqembu elilodwa, negoli elilodwa,” iNingizimu Afrika – okuyiona e”khombisa” umhlaba indlela, kwakuyizwe elihamba phambili ukuphatha indebe yomhlaba ngenxa yodumo lukaNelson Mandela – olwaziwa njengoMadiba Magic (Umlingo kaMadiba).
Umqondo wokuhlanganyela phakathi kweFIFA kanye ne “Sizwe seThingo LweNkosazane” (i Ningizimu Afrika edume ngayo) yayibonwe njengendlela lapho wonke umuntu ezozuza, futhi lokhu okwenzekayo.
Umangabe lokhu kuzokwenza uhulumeni afake izimali esizweni, emva “ kwalomcimbikazi”, lokho ngolunye udaba.
Kwizizakhamizi zaseNingizimu Afrika, ukugqugquzelela ukuphatha iNdebe Yomhlaba kwakungabonakali njengendlela yokuchitha izimali, noma into engeke yenzeka – konke kwakwenzelwa uthando lomdlalo.